Mailing box, also name cardboard postal boxes,shipping box, aircraft box or delivery box which widely use in packaging for garment, လက်ဆောင်, 3c electronic ect. with strong and sturdy. Most of the mailing box are come with E flute corrugated paper coated with 250-300 gsm art paper and there are two colors of E flute corrugated paper- white background & brown. It’s usually in CMYK printing, outside or inside as you want. The surface finished is in matte/glossy lamination. We can gold/silver hot stamping, ခရမ်းလွန်အစက်အပြောက်, embossing logo etc in your requirements. About the size of boxes, as we accept customize products. We will give you professional suggestion when we know the products you are going to pack in the box. မြှောင်းပုံစက္ကူသေတ္တာကိုလက်ဆောင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်, အဝတ်အစား, စျေးဝယ်, အလှကုန်, ပီဇာထုပ်ပိုးစသည်တို့. စျေးနှုန်းကပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့က Eco- ဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်.
ပစ္စည်း New arrival custom matt pink paper packaging corrugated box for mailing
နမူနာအချိန် 3-5 နေ့ရက်များ
Mass Production Time 15-30 နေ့ရက်များ
ထုပ်ပိုး 1pcs/opp, 20pcs/ctn or base on ur requirement
FOB PORT ကွမ်ကျိုးသို့မဟုတ်ရှန်ကျန်း
OEM / ODM ကြိုဆိုပါတယ်
ငွေပေးချေမှု TT, L / C, Paypal, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, အကြွေးဝယ်ကဒ်
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်ကြသည် 15 ပုံနှိပ်နှင့်ထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်များတွင်အထူးပြု Year.
3. မြှောင်းပုံ Box ကို
1. ထုတ်ကုန်များ၏အရွယ်အစား (အကျယ် x Gusset x အမြင့်)
လူကြိုက်များသူများ: PDF, CDR, အာအိုင်, PSD.
-ယေဘူယျအားဖြင့်, 5-7 နမူနာအောင်ဘို့ရက်ပေါင်း.
-အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏ခဲအချိန်ပမာဏပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်, ထုတ်လုပ်မှုအနုပညာ, စသည်တို့. FYI, တစ်လလုပ်နိုင်ပါတယ် 100000 PC စျေးဝယ်အိတ်များ.
No. We work on OEM orders. That means, အရွယ်အစား, ပစ္စည်း, quantity, ဒီဇိုင်း, packaging solution, etc will depend on your requests. Obviously, your logo can be printed on the products.
ဟုတ်တယ်. Each step of production and finished products will be carried out inspection by QC department before shipping.